Fanakaikezana sy fanalavirana - Joseph Wresinski EN
Home > Other languages > MALAGASY > Fanakaikezana sy fanalavirana
Fanakaikezana sy fanalavirana
“Ny fifandraisana amin’ny fahoriana dia sady mila fanakaikezana no mila fanalavirana. Ny fanakaikezana satria ny mahantra no iraisanay, izy no manambatra anay, izy no antom-pisianay. Ny fanalavirana raha raisina ho ny mahantra no tokony ho afaka mampandroso anay tsy an-kijanona amin’ny maha izahay anay. Tena nahavoa be mihitsy ny Firohotana, ary ny antony dia ny fisian’olona mijaly sy vahoaka eny am-pandehanana ka manery anay hiroso.
Ny olona no manakana anay tsy hahatonga ny vahoaka ho antony na paika na fialana bala mba hiadiana. Ny olona no manery anay hiaina araka ny fanaony, hamadika ho anay ny fitempon’ny fony, ny fanantenany sy ny eritreriny. Ny vahoaka kosa dia manery anay hijanona ho izahay ihany, ho lehilahy sy vehivavy azony ilazana hoe : « Ataovy daholo izay tianareo hatao, fa ianareo akory tsy hahatakatra na oviana na oviana, satria ianareo tsy niaina izay iainanay ». Raha tsy afaka niteny anay izany izy dia tsy voatery ho nanome fitenenana azy izahay”.